Nyika - TPAN - The World March
Nyika - TPAN
musha » Nyika - TPAN
Chibvumirano Chekudzivisa Nuclear Weapons
The 7 July 2017, pashure gumi pabasa ikussi aro nevadiwa, makura ruzhinji marudzi enyika kushandisa chikomo pose chibvumirano kuti kurambizwe zvombo zvenyukireya, pamutemo sevatsigiri Treaty iri kurambidza vana Nuclear Weapons . It uchapinda pamutemo simba kamwe 50 Marudzi yakasainwa uye chagamuchirwa.
Mamiriro ezvinhu aripo ndeekuti kune 83 yakasaina uye 50 yakagovanisa zvakare. Isu tiri kushaya 0 yekupinda musimba, pamusoro pekusvika iyo yakazara.
Rugwaro rwakakwana rwechibvumirano
Pamberi chibvumirano, zvombo zvenyukireya vaiva chete zvombo zvinoparadza kuti havana pasi akasanganiswa kurambidzwa (kana vane makemikari bacteriological zvombo), pasinei dzavo nemafashamo dzavanhu uye zvakatipoteredza nemigumisiro refu. The chibvumirano chitsva pakupedzisira Inozadzisa chinokosha pakakoromoka murayiro dzakawanda.
Unorambidza marudzi kuva, bvunzo, berekai, gadzira, kuchinjwa, nhaka, chitoro, kushandisa kana kutyisidzira kushandisa zvombo zvenyukireya, kana kubvumira zvombo zvenyukireya ari munharaunda yayo yakapakwa. Zvinodzivisawo kubatsira, kukurudzira kana kukurudzira munhu kuti atore mune rimwe remabasa aya.
Rudzi rune zvombo zvenyukireya runogona kubatana nechibvumirano, chero bedzi ichibvumirana kuti chivaparadze maererano nesarudzo yepamutemo uye yakagadzirirwa nguva. Nenzira imwecheteyo, rudzi runoshandisa zvombo zvenyukireya rweimwe nyika munharaunda yaro rinokwanisa kubatana, chero bedzi richibvuma kuibvisa mukati meimwe nguva.
Marudzi anofanirwa kupa rubatsiro kune vose vanobatwa nekushandiswa nekuedzwa kwezvombo zvenyukireya uye kutora matanho ekugadziriswa kwemamiriro ezvinhu akaipisisa. Iyo yekutanga inotarisa kukanganisa kwakabatwa nekuda kwezvombo zvenyukireya, kusanganisira kusapindira kwemaitiro kune vakadzi nevanasikana, uye kuvanhu vemarudzi ose munyika yose.
Chibvumirano chacho chakakurukurwa pahofisi huru yeUnited Nations muNew York munaMarch, June uye July we2017, pamwe nekubatanidzwa kwenyika dzinopfuura 135, uyewo nhengo dzemasangano ehurumende. I20 September 2017 yakavhurwa kuti isayinwe. Iyo ndeyokusingaperi uye ichave yakasungirirwa zviri pamutemo kune mamwe marudzi anozvibatanidza nayo.
Kushamwaridzana kweT TPAN kupinda musimba ndeimwe yezvinokosha zve World World for Peace and Nonviolence.
Tsamba yechinyoreswa kana kugadziriswa